နေပြည်တော် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအပေါ် တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့အမြင်
(FILES) In this file photo taken on February 12, 2020, members of the Myanmar military honour guard take part inaceremony to mark the 73rd National Union Day in Yangon. - Myanmar's army chief has raised on January 27, 2021 the prospect of scrapping the
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့တချို. နေပြည်တော်မှာ ဒီနေ့ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့တာကို၊ အဓိက တိုင်းရင်းသားပါတီတချို. မတက်ရောက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မူဗဟိုဌာနမှာလုပ်မယ်လို့ပြောပေမဲ့၊ အားလုံးကိုယ်စားမပြုဘဲ၊ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီ (USDP) အနေနဲ့ အဓိက ဦးဆောင်ဖိတ်တဲ့သဘောသက်ရာက်တာနဲ့ ဆွေနွေးဖို့အခက်အခဲတွေကြောင့် မတက်ရတာလို့ ဒီအဖွဲ့တွေက ဆိုပါတယ်။
ဒီပွဲကို တက်ရောက်မဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ တစ်ခုကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်၊ ဖယ်ဒရယ်ရေးအတွက်ဆို တက်ရမှာပေါ့လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုဝင်းမင်းက ရှမ်းနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေကို မေးထားပါတယ်။
မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ နိုငျငံရေးပါတီမြားအစုအဖှဲ့တခြို. နပွေညျတျောမှာ ဒီနဆှေ့ေးနှေးဖို့ ဖိတျကွားခဲ့တာကို၊ အဓိက တိုငျးရငျးသားပါတီတခြို. မတကျရောကျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ငွိမျးခမျြးရေးဖျောဆောငျမူဗဟိုဌာနမှာလုပျမယျလို့ပွောပမေဲ့၊ အားလုံးကိုယျစားမပွုဘဲ၊ပွညျထောငျစုကွံခိုငျဖှံဖွိုးရေးပါတီ (USDP) အနနေဲ့ အဓိက ဦးဆောငျဖိတျတဲ့သဘောသကျရာကျတာနဲ့ ဆှနှေေးဖို့အခကျအခဲတှကွေောငျ့ မတကျရတာလို့ ဒီအဖှဲ့တှကေ ဆိုပါတယျ။
ဒီပှဲကို တကျရောကျမဲ့ တိုငျးရငျးသားပါတီ တဈခုကတော့ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ၊ ဖယျဒရယျရေးအတှကျဆို တကျရမှာပေါ့လို့ ဆိုပါတယျ။ ကိုဝငျးမငျးက ရှမျးနဲ့ရခိုငျတိုငျးရငျးသားပါတီခေါငျးဆောငျတှကေို မေးထားပါတယျ။